मानव आवश्यकता को प्रकार
पृथ्वीमा सामान्य मानव अस्तित्व को लागि, यो आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक छ। ग्रह मा सबै जीवित प्राणीहरू आवश्यकता छ, तर ती सबै भन्दा एक उचित व्यक्तिगत छ।
जैविक। यी आवश्यकताहरू मानिसको विकास गर्न सम्बन्धित आफ्नो आत्म-संरक्षण संग। जैविक आवश्यकताहरू आवश्यकता को एक किसिम समावेश: खाना, पानी, अक्सिजन, इष्टतम परिवेश तापमान, procreation, यौन इच्छा, धनसम्पत्ति सुरक्षा। यी आवश्यकता जनावर मा उपस्थित छन्। हाम्रो कान्छो भाइहरूलाई यसको विपरीत, एक व्यक्ति आवश्यक, स्वच्छता, पकाउने खाना, र अन्य विशिष्ट अवस्थामा यस्ता;
भौतिक आवश्यकताहरू मानिसहरूले सिर्जना उत्पादनहरु तिनीहरूलाई बैठक आधारित छन्। यी समावेश: वस्त्र, आवास, यातायात, घरेलू उपकरण, औजार, र तपाईं काम, आराम, जीवन, संस्कृति को ज्ञान को लागि चाहिने सबै कुरा। अर्को शब्दमा, एक व्यक्ति जीवन को राम्रो कुरा आवश्यक;
सामाजिक। संचार को यस प्रकारको, आवश्यकता, समाज मा स्थिति, केही जीवन शैली संग सम्बन्धित छ आदर अधिकार विजेता। यसलाई अन्य व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न आवश्यक छ त मानिस, आफैमा अवस्थित गर्न सक्दैन। सामाजिक आवश्यकता मानव समाज को विकास को समय देखि खडा गरेका छन्। यी आवश्यकताहरू धन्यवाद, जीवन थप सुरक्षित हुन्छ;
आवश्यकता को रचनात्मक प्रकार फरक मा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ : गतिविधिहरु कला, विज्ञान, प्रविधि। मान्छे धेरै भिन्न छन्। त्यहाँ काम बिना हुन सक्छ नगर्ने ती छन्। तिनीहरूले पनि अरू केही परित्याग गर्न इच्छुक छन्, तर तिनीहरू यो बिना अवस्थित गर्न सक्दैन। यस्तो व्यक्ति - उच्च व्यक्तित्व। तिनीहरूलाई लागि सबै माथि स्वतन्त्रता रचनात्मक कला;
नैतिक आत्म-सुधार र मनोवैज्ञानिक विकास - एक प्रजाति मानव आवश्यकता, यो सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक दिशा मा वृद्धि secures जसमा। यस मामला मा, व्यक्ति गहिरो नैतिक र नैतिक जिम्मेवार बन्न tends। यस्तो आवश्यकताहरु धर्म मानिसहरूलाई familiarizing योगदान। नैतिक आत्म-सुधार र मनोवैज्ञानिक विकास व्यक्तिगत विकास को एक उच्च स्तर पुग्नुभएको छ जो मान्छे को लागि मूख्य आवश्यकताहरू।
आधुनिक संसारमा यो मनोवैज्ञानिक बीच धेरै लोकप्रिय छ व्यक्तित्व को मानविय सिद्धान्त। यसको उपस्थिति मानव मनोवैज्ञानिक विकास को उच्चतम स्तर संकेत गर्छ। मानव आवश्यकता र आफ्नो दृश्यहरु समय परिवर्तन हुन सक्छ। त्यहाँ एक स्टप हुन इच्छा हो। हामी एक व्यक्ति एक नकारात्मक चरित्र आवश्यकता छ जब मनोवैज्ञानिक विकास को विकृति बारेमा कुरा गर्दै छन्। तिनीहरूले एक व्यक्ति, अर्को चोट शारीरिक र नैतिक दुवै इच्छा छ जो एक पीडादायी अवस्था हो।
आवश्यकता प्रकार विचार, हामी त्यहाँ जो बिना मान्छे पृथ्वीमा बाँच्ने सक्दैन ती हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। तर तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ जो बिना ती छन्। मनोविज्ञान - विज्ञान पातलो छ। प्रत्येक व्यक्ति विशेष दृष्टिकोण आवश्यक छ। अरूलाई - केही मानिसहरू एक विशेष आवश्यकता र अरूलाई बीच उच्चारण किन प्रश्न? काम गर्न जस्तै केहि मान्छे, अरूलाई छैनन्, किन? जवाफ पनि पैतृक जेनेटिक्स वा जीवन शैली मा खोजे हुनुपर्छ।
मानव आवश्यकता को प्रकार पनि जैविक, सामाजिक आदर्श भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यो आवश्यकता वर्गीकरण को एक विस्तृत विविधता छ। मा आधुनिक मानिस त्यहाँ समाजमा प्रतिष्ठा र पहिचान आवश्यक छ। निष्कर्ष मा, हामी पूर्ण सूची स्थापना गर्न मानव असम्भव आवश्यक को भन्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न व्यक्तित्व आवश्यकताहरू को वर्गीकरणका। कोर पत्र को आवश्यकता बैठक बाँकी गठन समावेश छ।
मूल्य अभिमुखीकरण को भाग्य गर्न प्रमुख छ
आफैलाई निकास पर्याप्त! कसरी शान्त र बाँच्न सुरु गर्न सिक्न
कसरी वजन लागि प्रोत्साहन पाउन - व्यावहारिक सुझावहरू
शीर्ष5तरिका: भरोसा कसरी हासिल गर्न
Feykovye समाचार रूपमा हाम्रो दैनिक जीवनमा असर?
कसरी परिसर को छुटकारा गर्न? गाह्रो, तर वास्तविक छ
को सोभियत संघ राज्य सुरक्षा समिति: सुरक्षा सेवा को कथा
एक आलु संग प्यानकेकहरू: फोटो संग नुस्खा
जैविक ओक्सीकरण। अक्साइडिजन-कमी प्रतिक्रियाहरू: उदाहरणहरू
आधुनिक बाश्कीर सुन्दर नाम
लबी - यो ... अर्थ
मनका साथ Orthodontic vestibular प्लेट: समीक्षा
"टाटा Veloster ': वाहन को एक सिंहावलोकन
पासाडेना होटल Resort4* (मिश्र, Sharm el-शेख) - फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
टांका फलाम कसरी मिलाप गर्न?
Nevezhinskaja Rowan - झुक्किएर चमत्कार रूख पत्ता
निर्माण लागि मोड्युल भवनहरु: आकार र वजन